Easy Unlock - စကရင်ပိတ် On APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » လွယ်ကူသောသော့ဖွ - ဟာ Off တွင်စမတ်ဖန်သားပြင်
လွယ်ကူသောသော့ဖွ - ဟာ Off APK ကိုတွင်စမတ်ဖန်သားပြင်
လြယ္ကူသော့ဖွင့နှင့်အတူလွန်းလွယ်ကူပါတယ်မျက်နှာပြင်ကို turn off, screen ပေါ်မှာလှည့်။ စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ပုံမှန်အားဖြင့်သင်က screen ကို lock သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ဖို့နေအိမ် / ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါအချိန်အားဖြင့်, နေအိမ် / ပါဝါခလုတ်ကိုအားနည်းနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့အများအပြား features တွေနှင့်အတူလွယ်ကူစွာသော့ဖွ app ကို အသုံးပြု. ကြစို့: Wave ကို, သော့ဖွင့်သော့ခတ်လှုပ်ခါ, သော့ဖွင့်ဖို့ကိုလှုပ်, / screen ကိုပယ်ဖွင့်ဖို့လှန်ဖို့လှိုင်းသော့ခတ်ရန်။
လွယ်ကူသောသော့ဖွအားနည်းနေအိမ် / ပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်အတူ device များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သော, စက်ကိရိယာ၏အာရုံခံအသုံးပြုသည်။ လြယ္ကူသော့ဖွင့တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ကနေအိမ် / ပါဝါခလုတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ဘက်ထရီနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်:
- သင်ဖုန်းကိုလှန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြိမ်အရေအတွက်က setting နိုငျသညျ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Flip ။ သင့်ရဲ့ device ကိုကျောပိုးအိတ်, အိတ်ကပ်ထဲမှာပြန်လှန်အခါမှတပါး, လြယ္ကူသော့ဖွင့ ... detect နိုငျသောအခါအသုံးပြုသူလှန်ဖုန်းကပဲ screen ကို unlock ။
- သင်ကသင်၏လက်ကိုချီလွှဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းစက္ကန့်အရေအတွက်က setting နိုငျသညျ, proximity sensor ကျော်သင်၏လက်ကိုလှုပ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည် device ကို အသုံးပြု. အခါကမှား detect နှင့်အမှားအားဖြင့်နီးကပ်အာရုံခံကျော်သင်၏လက်ကိုချီလွှဲလွယ်ကူစွာသော့ဖွကြောင့်ကျနော့်အမြင်တွင်, သငျသညျ, မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ရန်အင်္ဂါရပ် Wave ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။
- သင်ဖုန်းကိုလှုပ်ခါရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြိမ်အရေအတွက်က setting နိုငျသညျ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလှုပ်ခါပါ။ အသုံးပြုသူကဖုန်းကိုလှုပ်အခါ Flip အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့ပင်လွယ်ကူသော့ဖွင့်မျက်နှာပြင်ကိုသော့ဖွင်။
သငျသညျမျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်, မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ဖို့လွယ်ကူသောလမ်းရှိသည်ဖို့အတူတကွ Unlock ရန်သော့ခတ်သို့မဟုတ်ခါရန် Flip, Unlock ရန်အင်္ဂါရပ် Wave ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့ကိုတောင်းဆိုကြောင်းအဆိုပါလုံခြုံရေးမူဝါဒအ "ချက်ချင်း device ကိုသော့ခတ်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ, လျှောက်လွှာပါဝါခလုတ်မရှိဘဲ (မျက်နှာပြင်ကို turn off) မျက်နှာပြင်သော့ခတ်နိုင်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဤလိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဤခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုလျှင်သင်သင်က disable သည်အထိလျှောက်လွှာကို uninstall လုပ်လိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ သငျသညျဒီ app ရဲ့ setting ကိုမျက်နှာပြင်၌ဤခွင့်ပြုချက်ကို disable သို့မဟုတ်ရိုးရိုးသော့ခတ်မြင်ကွင်း feature ကို disable နိုင်ပါတယ်။
- ဤ app ကိုထောက်ခံမှုက Android 4.0 +
- ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့စေရန်, သင့်ရဲ့ device accelerometer အာရုံခံကိရိယာသို့မဟုတ်နီးကပ်အာရုံခံရှိရမည်။
- သင် Lock ကိုမျက်နှာပြင်အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းချင်လျှင်, သင် setting ကိုအတွက်ဒီ function ကို enable ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
- သင် Task ကို Killer, မှတ်ဉာဏ် Booster, ဘက်ထရီ Manager က ... တူသောတချို့ apps များသုံးလျှင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်။ ပိုကောင်းတဲ့ပြုပြင် Whitelist အပေါ် app ကိုထားပေးပါ။
- ဘက်ထရီကယ်ဖို့အသုံးမပြုသည့်အခါလျှောက်လွှာအလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာကို turn off ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ဖို့ accelerometer အာရုံခံကိရိယာကိုသုံးပါလျှင်မျက်နှာပြင်ကို unlocked အခါ ie, ထို့နောက် application ကိုအာရုံခံကိရိယာကို turn off ပါလိမ့်မယ်။
ငါ (ဆိုလိုသည်မှာ: သော့ဖွင့်ဖို့ကိုချီလွှဲ, သော့ခတ်လှုပ်) သင်မျက်နှာပြင်ကို turn off ဖို့ screen နှင့်တလမ်းတည်းကိုဖွင့်ဖို့တလမ်းတည်းကိုအသုံးပြုဖို့သင့်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ သငျသညျနညျးလမျးမြားစှာအသုံးပွုရနျလြှငျ, ပိုဘက်ထရီဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လြယ္ကူသော့ဖွသုံးပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မဆိုမေးခွန်းများကိုအီးမေးလ်ကိုဆက်သွယ်ပါ: lta1292@gmail.com
- Optimized လျှောက်လွှာ။
- Fixed bugs အသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
- သော့ဖွင့်ဝန်ဆောင်မှုကို run သောအခါအချို့သောအမှားများကို Fixed ။
လွယ်ကူသောသော့ဖွ - ဟာ Off တွင်စမတ်ဖန်သားပြင်
3.45 ကို MB